Zvipatara zvekuzvishandira zvinogona kukubatsira kugadzirisa matambudziko iwayo? - Shenzhen JAK Chiremba Technology Co., Ltd.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Zvipatara zvekuzvishandira zvinogona kukubatsira kugadzirisa matambudziko iwayo?
Zvipatara zvekuzvishandira zvinogona kukubatsira kugadzirisa matambudziko iwayo?
inogona kupa yekudhinda mashandiro echipiri-chizvarwa ID kadhi ruzivo
otomatiki kupinda basa
Paunenge uchizadza mafomu anoda ruzivo rwevatengi ruzivo uye nhoroondo yeakaundi, unogona kungozvizadza wega ruzivo rwevatengi neruzivo rweakaundi nekutsvagisa yechipiri-chizvarwa ID kadhi uye pasipoti, senge zita, yekuzvishandira sevhisi, kero, kuburitsa masimba, account ruzivo, nezvimwe. Deredza zvinhu nemaoko zvinyorerwa nevatengi uye nekuvandudza iko kwechokwadi kwekuisa ruzivo
Chizere chinyorwa chinyorwa chekunyora basa
Zvemukati zvinoda kunyorwa nemaoko nemutengi zvinogona kunyorwa nemaoko zvizere pahwindo rekubata. Runyoro runogona kuzadzwa muchiChinese, Chirungu, manhamba, mavara, mavara asina kuroorwa, uye mavara akawanda panguva imwe chete pasina kuchinja nzira yekuisa.
Akaundi uye zita reakaundi otomatiki kuongorora basa
Kune akakosha masevhisi, akadai sekutumira mari, remitter uye iyo remittance account inogona otomatiki kuona kana iyo yakazadzwa account account nhamba inowirirana neiyo account account, uye iro zita reakaunzi harifanire otomatiki. Semuenzaniso: kana mutengi achizadza fomu rekutumira, kana iyo account account uye zita reakaundi rikazadzwa, sisitimu yacho inongoerekana yaita kuti zita reakaundi risaenderane kana uchichengetedza, uye fomu racho harigone kuzadzikiswa.
Zvinoenderana nezvido zvemabhangi emagetsi, yakabatana mitsetse yekumisidzana uye mafoni ekuratidzira ematanho akasiyana emagetsi anoshandiswa kuona zvinodikanwa zvekumira pamwe chete kumutsetse, kuregedzera kwekumira, pamwe nekuchinja mitsetse.
Kubudikidza nepamhepo kubhengi, nhare kubhengi, nharembozha uye dzimwe e-banking migero, zvinokwanisika kuchengetedza nzvimbo dzekutengesa senge manhamba emitsetse, makamuri emari eVIP, uye mamaneja evatengi. Panguva imwecheteyo, vatengi vanogona kubvunza nezve ruzivo rwekuparadzira rwemapazi emabhangi, mhando dzemasevhisi akavhurwa nemapazi, uye ruzivo rwekumutsara rwemapazi, uye vape mazano padanho pfupi kubva kumutengi, iyo pfupi bhizinesi yekugadzirisa nguva, uye yakazara bhizinesi network.
uye inopa kure kuzadza uye kumitsara masevhisi. Iyo pre-kugadzwa sisitimu inopa kwakabatana kuwana kune nhare kubhengi neInternet portals kuburikidza nemipindiro.
Kana mutengi wekuchengetedza asvika panzvimbo yacho, pinda nhamba yekuchengetera kuburikidza nechero system yekumusoro, uye system yacho inotsikirira nhamba yetikiti yekuchengetera.
Counter software yekufona system
Kubudikidza nekushandurwa kweiyo queue system yezvitoro, iyo mitsara mashandiro senge nhamba yekufona uye kuratidzwa kweiyo counter software, uye iri kure rubatsiro rweyekuchengetedza maneja kuti uwane nhamba inozadzikiswa.
Junankang yezvokurapa yekuzvishandira seinogadzira inogadzira, iyo yekuzvimiririra-sevhisi inoenderana nesisitimu dhizaini dhizaini ye "maawa makumi maviri nemasere ekuzvishandira", iyo inogona kudzikisira dambudziko rekuwandisa kwemotokari mumahotera emabhizimusi echinyakare, kutsiva zvikanganiso zvekutanga maawa ebhizinesi, uye kudzivirira vatengi kubva mubhizinesi bhizinesi Kunetseka kwebhizinesi kunoita kuti vatengi vanzwe vakasununguka, zviri nyore uye nehanya nebasa. Iyo yekuzvishandira-yega terminal ye bhizinesi horo kuwedzera uye kuwedzera kune sevhisi yebhizinesi horo. Vashandisi muindasitiri yezvemari vanogona kuita kubvunza account, kuzvishambadzira-wega, kudhinda sitatimendi, kuburitsazve, uye yekuzvishandira-kurasikirwa kurasikirwa mabasa. vashandisi muindasitiri yekutaurirana vanogona kuita yavo yega-yekufambisa nharembozha kudzima (kudzoka) uye foni bhiri kubvunza nekupinza yavo foni nhamba kuburikidza neiyo terminal Kudhinda, kubhadhara, invoice kudhinda, yekufonera ID, GPRS uye zvimwe zvakakosha bhizinesi kutanga uye kumisa kugadzirisa; unogona zvakare kutenga nharembozha makadhi, password recharge mareti. Kuburikidza nekukosha-kuwedzerwa kuvandudzwa, mamwe mabasa anowedzera-kukosha senge kutenga kwezvinhu zvinogona zvakare kuwanikwa kuburikidza nekutsigira michina. Iyo michina ine zvakanakira kusevha vashandi mari, kudzikisa mashandiro emari, kuenderera kushanda kwemaawa makumi maviri nemana, uye kushanda-kusina mhosho. Inogona kuiswa munzvimbo dzeruzhinji dzakadai sekufambidzana dzimba dzemabhizimusi dzimba, nzvimbo dzekubhadhara mari, zviteshi, madoko, nhandare, nzvimbo dzekutengesa huru, nezvimwe.
Junankang yezvokurapa yekuzvishandira-yega terminal inogadzira, zviteshi zvekuzvishandira zvinonyanya kushandiswa kudzikisira dambudziko revanhu vazhinji mumahoro emabhizinesi uye kuwedzera kumhanya kwekugadziriswa kwebhizinesi. Ivo anonyanya kushandiswa mubhengi, kufona, magetsi, zvekurapa, zvekubhururuka, zvekutengesa nemamwe maindasitiri. Nekuvandudzika kwenzanga, zviteshi zvekuzvishandira zvazonyanya kushandiswa. Yega-yekuzvishandira terminal zvigadzirwa semabhangi ATM michina, POS michina, uye mutsara manhamba emachina anofarirwa nemazhinji maindasitiri, kwete * nekuda kwega-yega-yekuzvishandira terminal michina pachayo. Iwo ari nyore masevhisi pano zvakare chinhu chakakosha chigadzirwa chezvemagariro uye hupfumi. Mumakore achangopfuura, nekufambiswa kwetekinoroji yeInternet, maindasitiri senge mari, kurapwa, uye zvifambiso zvave kuramba zvichida kuzvishandira-wega sevhisi yekushandisa.
Yapfuura:Yega-yekuzvishandira ekurapa michina yekugadzira
Tevere:Ndeapi mashandiro emakiriniki ekuzvishandira-ekuzvimirira